‘Ny vahoakako, avy aty ambony sy avy lavitra’: Havana an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Ireo sary ireo dia miresaka tantara TALOHA sy TAORIANA
Voadika ny 06 Novambra 2021 3:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Dansk, Esperanto , Français, Ελληνικά, Español
‘Ny vahoakako hita avy aty ambony sy avy lavitra.’ Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary Am-baravarana/Akaiky, 2020.
Lahatsoratra sy saripikan'i Juan-Sí González ho an'ny Periodismo de Barrio, navoakan'ny Global Voices indray.
Taona maro taty aoriana, niverina tao Havana aho tamin'ny taona 2020. Nanofa trano tao Havana Taloha aho ary nanasa ny fianakaviana manontolo handany faran'ny herinanro iray miaraka. Nasain'ny INSTAR (Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt) ihany koa aho hanao fanolorana haino sy jery ny asa notarihan'ny vondrona Art-De (zavakanto sy zo) tamin'ny taompolo 1980s sy ny asa nataoko teo aloha raha tany an-tsesitany. Tonga niaraka tamin'ny vadiko sy ny zanakovavy aho tamin'ny 31 Janoary.
Nandritra ireo andro vitsy nijanonako teto, naka sary vitsivitsy aho; ireo sary ireo dia voamarika ho BEFORE [teo aloha] sy AFTER [taoriana].
Ireo sary nopihana BEFORE [teo aloha] dia nopihana akaiky. Ireny sary ireny dia nalaina raha nivoaka maraina aho nandritra ireo andro voalohany nahatongavako, niandranandrana nijerijery teny an-dalamben'i Havana sy hifoka ny rivotr'ity tanàna tranainy ity. Nitovy hatrany ny zavatra nataoko nandritra ireo andro ireo, mandrakitra azy mba hamantatra tsara kokoa sy mahita ny lalako eny amin'ny araben'ny tanàna. Nandrakitra ny anatiny sy ny ivelan'ny fanorenana izay nanaitra ny tsiaroko aho, miezaka hanangana sy hanankehitriny ireo toerana izay tsapako ho mahazatra ahy.
Na izany aza, niova ny zava-drehetra tamin'ny 5 Febroary. Teny an-dalana hody avy nandehandeha iny aho dia nankeo amin'ny Hotel Plaza hisotro kafe. Tampoka teo, tamy avy any olona roa ary nipetraka teo andaniny sy ankilan'ny latabatro; mpiasan'ny fitsikilovana manao fanamiana sivily ireo. Nolazainy azy ireo fa tonga ry zareo hampitandrina ahy tamin'ny fanolorana nataoko tao amin'ny INSTAR. Namoaka taranjan-tsigara H. Upmann avy any am-paosiny ny iray ary nametraka izany tambony latabatra eo akaikin'ny Marlboros-ko. Nampita sigara iray tamin'ilay mpiasa iray hafa ary nandrehitra ny azy, nolazainy fa nijery ahy naka sary fako sy toerana ratsy amin'ny tanàna ry zareo. “Nahoana? Atao inona?” hoy izy tamiko.
Rehefa nifandrirarira sy nifampila kisa ela eo dia lasa ry zareo.
Ny ampitso, ora vitsy monja mialoha ny fanolorana, fantatro fa tsy afa-mivoaka any ivelany aho na inona na inona antony mandra-pandehako miala an'i Kiobà.
Nalaina avy lavitra ny sary nopihana AFTER [taoriana], ary nopihana avy aty ambony ireo olona teny an-dalana. Sary nalaina nandritra ireo andro faramparany nandritra ny nitoerako teto ireo, rehefa voarara tsy hivoaka any ivelany sy haka sary eny ankalamanjana. Nopihana miafina, avy ao an-trano, avy eny an-davarangana ary avy eny an-tampontrano tsy hay adinoina ity ireo sary ireo.
Fotoana niandrasana ela. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Anoloan'ny fanorenana, nandehandeha nanerana ny tanàna. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Anatiny, nandehandeha nanerana ny tanàna. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Anatiny, fotoana niandrasana ela. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Ny vahoakako jerena avy ambony sy avy lavitra. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Ny vahoakako jerena avy ambony sy avy lavitra. Photo: Juan-Sí González, from the series In Door/Close Up, 2020.
Ny vahoakako jerena avy abony sy avy lavitra. Saripika: Juan-Sí González, avy amin'ny andian-tsary In Door/Close Up, 2020.
Juan-Sí González dia teraka tao Santiago de Cuba (1959). Nianatra tao amin'ny Oniversiten'ny Zavakanto tao Havana (ISA) ary voafantina handray anjara amin'ny Havana Biennial faharoa. Tamin'ny taona 1987 izy niara-nanorina ny vondrona Art-De (zavakanto sy zo) ary nanomboka nitondra ny dingana firotsahana an'arabe tao Havana. Nonina tao Ohio izy hatramin'ny taona 2003, izay nahazoany loka telo noho ny zavabita saro-kianina (excellence) tamin'ny asany tao amin'ny Ohio Arts Council, sy fonenana maharitra tao amin'ny foiben-javakanto sy oniversite. Voafantina izy handray anjara tao amin'ny The Bronx Latin American Art Biennial, NY; El Museo del Barrio Biennial, NY ary ny FotoFocus Biennial tao Ohio. Ny asany dia efa naranty tao amin'ny The Frost Art Museum, Fort Lauderdale Museum of Art, Museum of Latin American Art, Indiana Museum of Art, Museo Carrrillo Gil, The Instituto Tomie Ohtake, Lima Centro de la imagen, Southeastern Center for Contemporary Art, Virreina Palace ary ny Centre Pompidou, ankoatra ny hafa tsy voatanisa. Samy ahitana ny asany na any amin'ny angom-panjakana na angon'olotsotra.